बुलबुल नेपाल | गाउँमा बढेको बालविवाहले हैरान भए !
दिपेश धामी । बझाङका उच्च हिमाली भेगमा बालविवाह अहिले पनि कायमै छ । त्यहाँका गाउँघरमा दिनैपिच्छे बालविवाह भइरहेको छ । विशेष गरी आज म जिल्लाको छबिस पाथीभेरा गाउँपालिका वडा नम्बर ७ मा भइरहेको बालविवाहबारे जानकारी गराउँदैछु । मैले यो आफ्नो लेखमा सिमीत वडाकोबारे मात्र जानकारी राख्नुको कारण समग्र जिल्लाको अवस्थाबारे पूर्ण जानकार नभएर नै हो । म जन्मे–हुर्केको वडा भएकाले पनि ७ नम्बर वडाकोबारे जानकारी बढी छ । यो वडामा नौरा, घट्टे, बुडखोरी, खोरीलगायत गाउँ पर्ने गर्छन् ।
यी गाउँहरुमा अहिले झन् बालविवाहले तिव्रता पाएको छ । बालविवाह एक सामाजिक विकृती हो । यसबारे जनमानसमा चेतना नपुग्दा घट्नुको सट्टा बढ्दै गएको छ । सरकारले नै पुरुषको हकमा २२ र महिलाको हकमा २० तोकेको छ । तर, यहाँका गाउँमा यो नियमको कुनै कार्यान्वयन नै भएको छैन । २०–२२ को उमेर पुग्दा त अधिकांशले छोरा–छोरी पाइसकेका हुन्छन् ।
अहिले पनि यो गउँमा १३–१४ वर्ष नपुग्दै विवाह गरिदिने चलन विद्यमान नै छ । खासमा किन यो गाउँमा बालविवाह कम हुन सकेन? यो प्रश्नको उत्तर बुदाँगतरुपमा यस्ता हुन सक्छन्–
२–प्रविधिको दुरुपयोग (मोबाइल, फेसबुक)
६– सामजिक संघसस्थाको नजर नपुग्नु
७– विद्यालयमा बालविवाहका नकारात्मक पक्षबारे विद्यार्थीलाई प्रशस्त जानकारी नदिनु इत्यादि ।
यस्ता कारणलाई न्यून नगर्दासम्म बालविवाह कम गर्न कठिन छ । बालविवाह यहाँको एक प्रमुख समस्या हो । यसको न्यूनिकरणका लागि गाउँमा पहल भएको देखिँदैन । शिक्षित व्यक्ति नै बालविवाहको पक्षपोषणमा देखिन्छन् । प्रहरी चौका नजिक छैनन्, बालविवाह गर्दा हुने असरबारे जानकारी छैन । केवल चिन्ता छ त अभिभाकलाई छोरा–छोरीको विवाह गरिदिने । गाउँमा अहिले पनि छोरा–छोरीको विवाह गरिदिने प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । उमेर पुगेको भए त ठिकै हो विवाह गरिदिनु पर्छ नै । तर, यहाँ न उमेर पुगेको छ नत शिक्षा नै ! यसकारण अब बढ्दो बालविवाहलाई कम गर्न सबैले जागरुक र सचेत हुन आवश्यक छ । भयावह स्थितीमा रहेको बालविवाह न्यूनिकरणका लागि सामाजिक चेतना नै प्रथम भएकाले त्यसमा विशेष जोड दिनुपर्छ ।
मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेको यो अवस्थामा सामाजिक विकृती कायमै रहनु समग्र राष्ट्र नै पछि पर्नु हो । बालविवाह त केवल उदाहरण मात्र हो । गाउँ–घर मा यस्ता कयौं सामाजिक विकृती कायमै छन् । यसको न्यूनिकरणका लागि सामाजिक सञ्जालको सदूपयोग, विद्यालयमा यसको असर–प्रभावबारे विशेष जानकारी, सामाजिक चेतनामूलक कार्यक्रममा जोडलगायत विशेषमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।
सोमबार, ०४ चैत २०७५ मा प्रकाशित
Tags : #Child Marriage #Diepsh Dhami #Bajhang